QALAB-TAREENKA "BELARUS-132N": SHARAXAAD FARSAMO IYO SIFOOYIN - MISHIINADA GAARKA AH
Aqoonsiga gawaarida yaryar "Belarus-132n": sifooyinka farsamada iyo sharaxaadda
Iyada oo bilawga guga, beeralay kasta wuxuu si weyn u kordhiyaa xaddiga shaqada ee beeraha. Carrada waa in la xoqo, Bacriminta waa in la sameeyaa, iyo midna waa in aan iloobin wax-soo-saarka baradhada inter-line. Si loo fududeeyo hirgelinta mashruuc aad u farabadan oo ka shaqeeya garoonka mashiinka yar yar MTZ "Belarus-132n" - mashiinka qalabsan oo sameeya shaqo badan oo dhulka ah. Sidaa daraadeed, wuxuu sidoo kale shaqo ka heli doonaa magaalada - nadiifinta waddooyinka, cawska cawska ku darsado, xitaa buuxinta godadka yaryar iyo barafka isaga u dhigo.
Qeexida gawaarida yaryar
Nuqulkii ugu horreeyay ee mashiinka beeraha ayaa ka soo baxay xarigga kuleylka 1992 markii uu ka dhacay agagaarka Smorgon Aggregate Plant. Waa nooc ka fiican tareenka "Belarus-112". Si kastaba ha ahaatee, si ka duwan kii hore, ma jiraan wax kabadal ah oo ku yaala Belarus-132n - waa goob hawleed lagu rakibay halkii ay ka ahaan lahayd. Haddii ay jirto xaalad cimilo xun, shaqaaluhu wuxuu ilaalin doonaa viska. Muraayadaha awoodda leh (R13) oo leh ilaaliyaha maskaxda ee Christmas wuxuu caawiyaa inuu barto waddada.
Sidoo kale akhri wax ku saabsan gawaarida yaryar ee Japan.
Waa muhiim! Haddii gawaarida gawaarida ee "Belarus-132n" ay adag tahay in la soo celiyo, markaa waxaad u baahan tahay inaad xirto qalabka semi-automatic ee qashinka hore.
Qaababka qalabka iyo naqshadeynta
Gawaarida yaryar ee "Belarus-132n" waxay leedahay gawaarida afar-lugood oo buuxa, laakin gacan-qabsi ku ah qalabka korontada ayaa kaa xakameyn kara gawaarida dambe. Qolka hore wuxuu u qaabeeyay kala duwanaansho shaqeynta xiridda. Maqnaanshaha boodhka, qashin-kala-duwan, ka shaqeynta qubayska saliida. Gawaarida Belarus-132n waxaa lagu qalabeeyaa nidaam hideyaal ah, oo ay ku jiraan mishiin ay ku shaqeyneyso mishiin, qalab hiidi ah iyo shirkad shidaal ah, taas oo lagama maarmaan u ah in la xakameeyo dhismayaasha dhaadheer.
Ma taqaanaa? Sanadkii 1972, Dhismaha Smorgon Aggregate wuxuu soo saarey habka tractor million (MTZ-52a). Kadib toban sano oo ka mid ah hawlgalkii guulaystay ee beerta wadajir ah, waxaa la siiyay darawalka tareenka ee isticmaalka shakhsi ahaaneed.
Aan u fiirsanno waxa ku saabsan Belarus-132n-tareenka yaryar - sifooyinka farsamada waxaa lagu soo bandhigay miiska:
1 Nooca engine / model Shidaalka Batroolka / Honda GX390
2 Miisaanka, kg 532
3 Qiyaasaha, dhererka - dhererka - width - length - 2000 - 1000 - 2 500
4 Saldhig, mm 1030
5 Raac, mm 840, 700, 600 (la hagaajin karo)
6 Nidaamka bilowga Booska, bilowga gacanta iyo korontada
7 Nadiifinta beeraha, mm 270
8 Tirada duurjoogta - gadaal - gadaal - 3 - 4
9 Awood darajo kW 9,6
10 Isku-soo-boodi oo leh qiyaas ah 700 mm, m 2,5
11 Xawaaraha dhaqdhaqaaqa, gadaal - gadaal - 13 - 18
12 Isticmaalka shidaalka gaarka ah, g / kWh, laakiin aan ka badneyn 313
13 Taabashada, kN 2,0
14 Miisaanka ugu badan ee culeyska, kg 700
15 Hawlgallada heerkulka ee cagaf-qaadaha Laga bilaabo +40 ° S
ilaa -40 ° C
Waa muhiim! Qalab aan kala go 'lahayn ee mishiinka, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo gaaska AI-92.
Fursadaha gawaarida ee beerta iyo beerta jikada (qalabka guryaha lagu nuugo)
Qodobka ugu muhiimsan ee cutubkani wuxuu muujinayaa noocyo kala duwan oo ku xiran tarbiilka:
Gaadiidka baabuurta Waa lagama maarmaanka u ah gaadiidka, oo ay ku jiraan bulk. Wixii ku habboon, jirka ayaa ka sii daraya, oo la geliyo shiraac. Miisaanka loo oggol yahay gaadiidku waa ilaa 500 kg.
KTM mower. Waxaa loogu talagalay cawska cawska dhulka ama meelaha cawska (cawska, beeraha, beeraha). Xawaaraha socdaalka ee makhaayad 8 km / h.
Okuchnik. Qalabku wuxuu lagama maarmaan u yahay in lagu shaqeeyo meel bannaan ee sariiraha iyo daryeelka ee warshado kala duwan. Miisaanka naqshadiisu waa 28 kg. Xawaaraynta marka la shaqeynayo meel wareega 2 km / h. Hawlaha 2 saf oo isku mar ah ayaa suurtagal ah.
Dhaqdhaqaaqa tareenka. Waxaa loo isticmaalaa dabacsanaanta ciidda, jabinta dhulka la qaboojiyey, iyo sidoo kale in la abuuro abuur iyo Bacriminta dhulka. Miisaanka qalabka waa 56 kg. Xawaaraha dhererka leh ee naqshadani waa wax ka badan 5 km / h.
Qaado PU. Waxaa loo isticmaalaa in lagu qodo dalagyo xidid (baradho, xididdo) iyo beerista ciidda. Xawaaraha lagu ogolaan karo - wax ka badan 5 km / h.
Buraash burushka. Waxaa loo adeegsadaa adeega degmada oo loogu talagalay uruurinta qashinka dhulka.
Qalabka bulldozer. Waxaa loo qaabeeyey in la nadiifiyo aagga dhulka, qashinka iyo barafka, iyo weliba haraaga hurdada. Miisaanka qalabka waa 40 kg.
Digriiga baradhada. Waxaa loo adeegsaday qashin baradhada. Miisaanka digriiga baradho waa 85 kg. Meelaha waaweyn ayaa muujinaya waxtarka liita. Qiyaasta celcelis ahaan qalabkan waa 3.8 km / h.
Visor. Farsamaynta waxaa lagu sameeyey iyadoo la daryeelayo shaqaaleysiiyaha cagafta. Ka ilaali roobka iyo qorraxda.
Kobcin Waxaa loo isticmaalaa abuurista abuurka dhulka, dabacsanaantiisa iyo heerarka ciidda. Waxaad xiri kartaa haramaha. Miisaanka dhismaha - 35 kg.
Mishiinka. Waxaa loo adeegsadaa in lagu shaqeeyo ciidda aan caddaalad ahayn dhulka oo leh mugdi ilaa 10 digrii ama 100 mm. Miisaanka qalabka waa 75 kg. Xawaaraha dhererka leh cutubka wax lagu gooyo waa 2-3 km.
Mashiinka Awoodda Korontada (PTO) wuxuu u ogolaanayaa in la xakameeyo.
Ma taqaanaa? Gawaarida yaryar "Belarus-132n" ayaa caan ku ah Ukrain iyo Ruushka. Waxa kale oo ay ka heleen isticmaalka Jarmalka, laakiin waxaa lagu soo saaraa magaca kale ee Eurotrack 13H 4WD.
Miyaan iibsadaa "Belarus-132n"
Dhab ahaantii waa u qalantaa. "Belarus-132n" waxay kor u qaadi doontaa dhammaan noocyada shaqada ee ugu muhiimsan ee cillad-dhaqameedku sameeyaan, - duubista, ka shaqeynta sariiraha, gaadiidka alaabta, beerashada. Laakiin waqti isku mid ah wuxuu leeyahay faa'iido wayn - cabbir yar, kaas oo ka caawiya inuu si fudud u dhexgalo sariiraha. Waa in la ogaadaa in gawaarida "Belarus-132n" goobta shaqadiisu ay u dhowdahay dhulka, taas oo suurtogal ka dhigaysa in goobta shaqada lagu qabto si tayo leh oo sax ah, xulasho balaadhan oo dheeraad ah oo dheeraad ah ayaa suurtagal ah in ay isticmaalaan cutubkan sanadka oo dhan.
Waxaad baraneysaa MT3-892, MT3-1221, Kirovets K-700, Kirovets K-9000, T-170, MT3-80, Vladimirets T-25, MT3 320, MT3 82 iyo T-30 Traktors, oo loo isticmaali karo noocyo kala duwan oo shaqo ah.
Sida aad arki karto, horumarka mashruuca beeraha weli ma istaagayo, taas oo kuu oggolaaneysa inaad si aad ah ugu sahlanaato shaqada sanadlaha ah ee dhulka, iyadoo la ilaalinayo iyo xaaladaha qaarkood xitaa kordhinta wax soosaarka iyo waxtarka.